एकता सम्मेलन नसकिँदै कमल थापा हावी भएपछि... - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
एकता सम्मेलन नसकिँदै कमल थापा हावी भएपछि…	राणा र चन्द समूह एक ठाउँमा !
पुस २१ गते, २०७३ - १२:५३
काठमाडौं, २१ पुस । राप्रपा र राप्रपा नेपालबीचको एकता भइ एकता सम्मेलन भइनसक्दा नै एकतापछिका वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा हावी भएका छन् । राजतन्त्रको एजेण्डालाई थाती राख्दै दुई राप्रपाबीच मंसिर ७ गते पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो । पार्टी एकता घोषणासँगै पार्टीको अध्यक्ष दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई बनाइयो ।
एकता महाधिवेशन तीन महिनाभित्रै गर्ने गरी पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षमा पशुपतिशमशेर राणा र अध्यक्ष कमल थापा भएका छन् । पार्टीको भागबण्डा मिलाउन भन्दै दुबै पार्टीका तर्फबाट पूर्ववत जिम्मेवारीमा राख्दा पदाधिकारीको संख्या पनि निकै ठूलो बनेको छ ।
तीन महिनाभित्रै एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्दै अधिकांश जिल्लामा एकता सम्मेलनसमेत गरिसकिएका छन् भने क्षेत्रीय सभाहरु पनि भइरहेका छन् । ती अधिकांश सभा सम्मेलनहरुमा पनि अध्यक्ष थापा आफै पुग्ने गरेका छन् । यसअघि आफ्नो एजेण्डालाई स्थापित गर्न लागेका थापा पार्टी एकतासँगै जिल्लाहरुमा पनि अधिकांश नेतृत्व हात पार्न सफल भएका छन् ।
ठूला सभा सम्मेलनमा पार्टीका दुबै अध्यक्षको उपस्थिति रहने गरेपनि राणा निरिह देखिने गरेका छन् । प्रचारप्रसारमा पनि थापा निकै अगाडि छन् । पर्चा पम्प्लेटहरुमा पनि राणाको भन्दा थापाको तस्विर आकर्षक र ठूलो बनाएर छापिने गरेका छन् । थापाले आफ्नो गतिविधिहरु सामाजिक सञ्जालबाट पनि उत्तिकै प्रचार गर्छन् । ट्वीटरमा २ लाख ७४ हजार उनको फ्लोअर छन् भने फेसबुक पेजमा झण्डै एक लाख लाइक छ ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट नजितेर पनि थापाको पार्टीले समानुपातिकबाट राम्रो मत ल्याएर संसदकै चौथो ठूलो दल बनेको थियो ।
पाेष्टरमै थापा बरिष्ठ
राप्रपाका अन्य नेताहरु भन्दा ‘फुच्चे’ मानिने थापा पार्टी एकतापछि अन्य नेताहरुलाई ‘फुच्चे’ साबित गरिदिएका छन् । पार्टी एकतापछि पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षको त नामै आउन छाडेपछि राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरु तिल्मिलाउन थालेका छन् ।
थापा आफैमा पनि जुझारु नेता तथा स्पष्ट वक्ता भएका कारण पनि अन्य नेताहरुलाई माथ गर्नु स्वभाविक भएको थापा निकटका एक नेताले बताए । नेताको काम र ब्यहारले नै नेतृत्व स्थापित गर्ने भएकाले त्यसका लागि जिम्मेवारी पाएर मात्र नहुने काम गरेर देखाउन सकेमा आफै नाम आउने ती नेताको तर्क छ ।
भएपछि एकता सम्मेलन समेत नहुँदै थापा पार्टीमा हावी हुँदै गएपछि पूर्व राप्रपाका नेताहरुलाई चिन्ता बढेको छ । राप्रपाभित्रै पनि नेतृत्वका लागि एकसमय आपसमै रस्साकस्सी गरी सामानान्तर पार्टी नै बनाएका राणा र चन्दहरुसमेत थापासमूहविरुद्ध एक ठाउँमा उभिन बाध्य भएका छन् । संसदमा राप्रपाको भन्दा थापाको सिट दोब्बर रहेकाले पनि थापा संसदमा पनि हावी छन् । एकताअघि राप्रपा नेपालको २५ सिट र राप्रपाको १२ सिट मात्रै रहेको थियो ।
पार्टी एकतापछि राजतन्त्रको मुद्दालाई थाती राखेर राप्रपाले हिन्दु राज्यको एजेण्डालाई जोडतोडले उठाइरहेको छ । स्रोतकाअनुसार राजतन्त्रको पक्षमा थापाले विशेष गरी वकालत गर्दै आएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई मतलव नगरी आफै अघि बढेपछि थापा शाह परिवारसँग त्यति सन्तुष्ट हुन सकेका छैन । त्यसैले पछिल्लो समय थापा राजतन्त्रकाबारे चुँइक्कसमेत बोलेका छैनन् । तर उनले राजसंस्थाप्रति आफ्नो आस्था कायमै रहेको बुधबार बीबीसीसँगको अन्तरर्वार्तामा भनेका थिए ।
पुस २१ गते, २०७३ - १२:५३ मा प्रकाशित
१२ यात्रु सवार मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा अागो लाग्यो
विदेशमा तीन छोरा गुमाएका दम्पतीको अठोटः अब सन्तानलाई भुलेर पनि विदेश जानै दिन्नौं
नारायणगढ मुग्लिन सडकमा तीन ठाउँमा पहिरो, सडक अवरुद्ध
एसईईः कुन ग्रेड ल्याउनेले के विषय पढ्न पाउँछन् ?
चीन भ्रमणबारे ओलीसँग अन्तर्वार्ताः अब काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीमा रेल चल्छ
नेपालको हवाई क्षेत्र इयूको कालोसूचीबाट हट्दै, जापान र युरोपमा उडान भर्ने तयारी
टोनी क्रुसको फ्रि किक गोलले जोगियो जर्मनी